Zụrụ Pregabalin ntụ ntụ (148553-50-8) Ndị na-emepụta & Factory
Ngalaba na-aga n'ihu (148553-50-8)
A na-ejikarị ntụ ntụ na-aga n'ihu (148553-50-8) iji mee ihe maka ịkwado Ọkpụkpụ; Neuropathic mgbu; Nsogbu nchegbu. Ọ bụ nke otu ọgwụ ndị a na-akpọ anticonvulsants.
Video pregabalin ntụ ntụ
Product Name Na-aga n'ihu
Chemical Aha (S) -3- (Aminomethyl) -5-methylhexanoic acid
ika aha Lyrica, ndị ọzọ
Klaasị ọgwụ ọjọọ Anticonvulsants, Ndị ọzọ; Ahụike, Ndị ọzọ; Ndị na-arụ ọrụ n'ụbụrụ
molekụla Fnhazi C8H17NO2
molekụla Wasatọ 159.229
Nkịtị Monoisotopic 159.1259 g / mol
Mgbu Point 186-188ºC
Esi mmiri 274.0 ± 23.0 Celsius C na 760 mmHg
Ọkara Ndụ nke Ndụ Awa 6.3-11.5
Sịkwa akwa Tigwe 0 - 4 C maka mkpirikpi oge (ụbọchị ruo izu), ma ọ bụ -20 C maka ogologo oge (ọnwa).
Antinye Pregabalin bụ ọgwụ a na-eji agwọ ọrịa ọrịa, ọrịa na-arịa neuropathic, fibromyalgia, na nsogbu nchịkọta ọnụ.
Pregabalin ntụ ntụ Description
1.Gini bu Pregabalin ntụ?
Pregabalin ntụ ntụ bụ ọgwụ a na-erekarị n'okpuru aha aha Lyrica na mpaghara dị iche iche n'ụwa. Ọ bụ ọgwụ mgbochi apịtị na-akpọkwa ọgwụ anticonvulsant. A na-eji ọgwụ ahụ agwọlata ihe ụbụrụ na-eduga na ọdụdụ. N'aka nke ọzọ, Pregabalin na-emetụta kemịkalụ ụbụrụ nke na-eziga akara mgbu n'ofe akwara ahụ. A na-eji ọgwụ ahụ eme ihe na ahụike ụwa iji gwọọ mgbu dị iche iche nke ọrịa dị iche iche dịka mgbu akwara nke fibromyalgia, ọrịa shuga, na ọbụna mgbu mgbu.
2.Etu ị ga-esi Na-aga n'ihu ntụ ntụ?
Pregabalin (148553-50-8) dị ka capsule, ịgbatị, ma ọ bụ mbadamba ogologo oge na-ejikwa ọnụ na-ekwu okwu (mmiri). Predị niile Pregabalin na-arụ ọrụ n'otu ụzọ ahụ, dọkịta gị ga-abụkwa onye kachasị mma ịhọrọ nke kwesịrị ekwesị maka gị dabere n'ọnọdụ gị ma ọ bụ ihe ịchọrọ inweta site na njedebe nke usoro onunu ogwu. Bụ ọgwụ na -eme ọnụ na-abụ ọgwụ ọgwụ mgbu kacha mma maka ọtụtụ ndị ọrịa na-enweghị ike ị inụ ọgwụ irighiri mgbe niile. Ọgwụ ahụ nwekwara ike ibute ụfọdụ nsonaazụ dị oke njọ mgbe ejiribiga ya ókè ma ọ bụ jikwa ya mee ihe n'ụzọ na-adịghị mma. Gbalịsie ike na ị na-agbaso ntuziaka usoro usoro ọgwụgwọ maka nsonaazụ kachasị mma
Enwere ike iji Pregabalin yana ọgwụ ndị ọzọ iji nyere aka ọgwụgwọ nke nsogbu ọdịdọ n'ime ụmụaka gbara afọ anọ ma ọ dịkarịa ala afọ anọ. Ruo ọtụtụ afọ ugbu a, ọgwụ ahụ na-arụ ọrụ dị mkpa na ụwa ahụike, na-eme ka ọ bụrụ otu n'ime ọgwụ ndị nwere ike ịkwụsị mgbu na ahịa. Ekwesịrị ị takenụ ọgwụ a naanị n'okpuru ọgwụ dọkịta maka nsonaazụ ka mma. Agbanyeghị, jide n'aka na ị ga-enweta Pregabalin n'aka onye na-ere ahịa ma ọ bụ ndị nrụpụta gburugburu gị.
3.Pregabalin ntụ ntụ n'ihi na ire
Iswa na-agbanwe, taa, ị nwere ike ịzụta Pregabalin ntụ ntụ na ntanetị na ọnụahịa anyị. Weebụsaịtị anyị dị mma-enyi na enyi, na-eme ka ọ dịrị gị mfe ịmegharị site n’otu ngwaahịa gaa na nke ọzọ ma mekwa iwu gị n’ime sekọnd. Nwere ike ịnweta weebụsaịtị anyị site na ama ama gị, mbadamba, ma ọ bụ na laptọọpụ gị. N'elu nke a, anyị na-ebuga ngwaahịa gafee ụwa na n'ime ntakịrị obere oge enwere ike. You nwere ike ịzụta Pregabalin n'ọtụtụ ma ọ bụ ọbụna zuru ezu maka usoro usoro onunu ogwu gị.
4.Where kedu ịzụta pregabalin ntụ?
Anyị bụ ndị na - eduga ndị na - ebunye Pregabalin na mpaghara a, ọnụ ahịa ndị anyị na - akwụ ụgwọ anaghị emebi ogo ngwaahịa anyị. Anyị na-enye ngwaahịa ọgwụ dị iche iche dị mma na ụlọ ahịa anyị n'ịntanetị. Agbanyeghị, anyị na-adụ ndị ahịa anyị ọdụ oge niile ka ha hụ na ha nyochachara ọgwụ tupu ha amalite iwepụta ngwaahịa anyị. Ngwaahịa ọgwụ anyị nwere ike ibute nsonaazụ mgbe ejiri ya ma ọ bụ jụọ ya karịa. Pregabalin maka ire ere dịkwa na ụlọ ahịa ọgwụ dị nso mana jide n'aka na ị ga-enweta ya site na onye na-ere ahịa tụkwasịrị obi. Ọ bụghị ụlọ ahịa ọgwụ niile dị n'ịntanetị ma ọ bụ nke anụ ahụ na-enye ngwaahịa dị mma.
1 nyochaa maka Ngalaba na-aga n'ihu (148553-50-8)
admin - July 2, 2019 :
Ngwaahịa Pregabalin ntụ ntụ dị ezigbo uru.